အမျိုးသား များအတွက် ..ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမျိုးသား များအတွက် ..ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်..
အမျိုးသား များအတွက် ..ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်..
- candle .
Posted by candle . on Sep 19, 2012 in Creative Writing | 34 comments
ယောက်ျားလေးများသော မိသားစုတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသည့်အလျောက် ယောက်ျားလေးများနှင့်
ပတ်သတ်သည့် ဆေးနည်းကောင်းလေးများကို အမှတ် ထင်ထင် ရှိခဲ့ရပါသည်။
အကိုများ မောင်များ၏ လက်တွေ့ ကျကျ ရောဂါ ပျောက်ကင်းမှုများကြောင့်လည်း နီးစပ်ရာ
အမျိုးသားသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို လက်တို့ လမ်းညွှန်ကြည့်ရာ အမှန်တကယ်ပျောက်ကင်း
ကြကြောင်းသိရပြန်ပါသည်။ သို့ နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ နှုတ်၏ စောင်မခြင်းနှင့်ဆေးညွှန်းပေးခဲ့ရာ
ယခုလည်း ဤရွာလေးထဲမှ ဦးဦး၊ အကို၊ မောင်လေးများသို့ ထပ်မံမျှဝေလိုပါသည်။
အမျိုးသားများ ယခင်ပုံမှန် အခြေအနေထက် အကြိမ်ရေ ပိုများစွာ မကြာခဏ ဆီးသွားနေပါက
မောပန်းနွမ်းနယ်၍ အားအင်ကုန်ခမ်းသလို ဝေဒနာခံစားလာရပါမည်။ ထိုအခါ
မီးဖိုချောင်သုံး ဂျင်း အနည်းငယ်ယူ၍ ခပ်ပါးပါး ခပ်မျှင်မျှင်လေးများဖြစ်အောင်လှီးပါ။
ကွမ်းသီးခပ်ကြီးကြီးတစ်လုံးစာခန့် ရသောအခါ သကြားကွမ်းသီးတစ်ခြမ်းစာခန့် ထည့်ှု၍နယ်ပြီး
ဒီအတိုင်းဝါးစားပါ။ တစ်နာရီခြား၍ သုံးကြိမ်ခန့် စားပြီးပါက ယူပစ်သလို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါ
လိမ့်မည်။ အဖိုးနည်း၍ တန်ဖိုးကြီးသည့် မြန်မာ့ဆေးနည်းကောင်း ဖြစ်သောကြောင့်
About candle .
candle . has written 11 post in this Website..
enter to village on 18.8.2012
View all posts by candle . →
ပီးမှ. ဆီး တဲ့.
သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးမှ… ” ဆီး” တဲ့…
ဘီယာသောက်ပြီးရင် ဆီးခဏခဏသွားတဲ့လူများကို ဂျင်းနဲ့သကြားတိုက်ရမယ်…
မိန်းမမှာ မီး ..ယောက်ျား ဆီး တဲ့ ..ရှင့်..
ကိုဝတုတ် ကြောင် ရဲ့ ..
ကိုကို ဒဿ ဘဝ…အဟိ..
ကျနော်က ကိစ္စ မရှိပါဘူးဗျာ
ကျနော့်သူငယ်ချင်း ကိုဖက်ကတ်ကြီး အတွက်ပါ.
ခမျာ. သနားဇယာပါအေ ရယ်.
ကျော် သထေးဖြစ်ရင် ဘီယာကို သကြားနဲ့ဂျင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ပါ့မယ်..
ကျတော်က ဟိုဟာထင်နေတာ…း) တခြားဆေးနည်း ပြောပါတယ်း)
ကျွန်တော် ထင်တာက ဆီး မဟုတ်ဘူး။
တောက်…ငါ့နှယ်……လွဲလိုက်မှ့ဖြင့်..တက်တက်စင်အောင်ကို..လွဲတာ….မှန်းချက်…နှမ်းထွက်နဲ့မကိုက်…………ဆီးပဲ…မဝါဆိုရယ်….လိုတာထက် အကြိမ်ရေ ပိုများ..လို့ဒုခန….ဖြစ်တဲ့…ပုရိသ..ရယ်လို့….ကျနော်..တစ်တက်နဲ့တကယ်…(တစ်သက်ပြောပါတယ်..)…One ခါမှ့မကြားခဲ့ဘူးပါဗျာ…..မွေးမိ့ခင်ရဲ့ အဖေ..ကျနော့်အဖိုးမှာ….ကျားကြီး…၄.ယောက်( အဖိုး..၄..ယောက်ပေါ့..)…ဦင်္းလေး…က ၁၂ ယောက်….(ဒေါ်လေး.ပေးပြီးတော်တာရယ်…ဦးလေး..အရင်းရယ်..)..ကျား..၁၂….အဲ့ဒီဦးလေး..ကျား..၁၂ယောက်က ပေါက်တာ…..နောက်ထပ်..ကျား…..နေဦးဗျ…ညီအကို.ဝမ်းကွဲတွေ မေ့နေလို့ ပြန်စဉ်းစားနေတာ ခဏ..အဲ့..ရပြီ..အရွယ်မရောက်သေးတာရယ်…အရွယ်ရောက်လို့ လပ်ရားလပ်ရား..လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေရယ်.(သူတို့ကတော့ လူပျို..ခြေတက်ပေါ့..)..အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့..သူတွေရယ်..လူပျိုခြေကျ…အကိုတွေရယ်…(ဘော်လုံးစကားပေါ့ဗျာ လူပျိုခြေကျဆိုတာ….၃၀ မပြည့်တပြည့်…..၃၀..ဝန်းကျင်ပေါ့..)..ဂေါ်မစွံ့..လူပျိုသိုးအကို တွေရယ်..ပေါင်းလိုက်မယ်ဆို…..တစ်ဆွေလုံး…တစ်မျိုးလုံးပေါင်းလိုက်ရင်…အားလုံး….ကျားကြီး..သာတီးတူးးးကျော်မယ်..နော်….ဒါတောင်..အမတွေ..နှမတွေက မွေးတဲ့ကျားတွေမပါသေးဘူး..ယောက္ဖ.တွေဆို..စားရင်းထဲ မထည့်သေးဘူး…ကြားဘူးပေါင်ဗျာ…ဆီးလွန်တဲ့..ပုရိသ..ရယ်လို့…
ပို့ စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ စေတနာကတော့ ကောင်းပါရဲ့ 
သို့ ပေသည့် အဲဒါထက် ပိုပြီး ယောက်ျားများအတွက် ကောင်းမယ့် နည်းတစ်လက်ကို ကျုပ် မောင်ပေ က ဒီလိုလေး ညွှန်လိုက်ပါရစေ
ကျုပ်တို့ အမျိုးသားများဟာ ရံဖန်ရံခါမှာ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်ပဲလို့ ဆိုပေမယ့်
ပိုပြီး အားကောင်းမောင်းသန်ဖြစ်စေဖို့ ဆိုရင်တော့ (စိတ်ကတော့ ပါ ပါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါ အားပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့) ၊ “အား” မသုံးမှီ တစ်နာရီခန့် အချိန်မှာ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး ခပ်မှည့်မှည့်ပျော့ပျော့တစ်လုံး နဲ့ အတူ “ အေဘီစီ ” ဘီယာသံဗူးတစ်ဗူး ကို စားသောက်လိုက်ပါ ။
ပိုပြီးစွမ်းချင်သပ ဆိုရင် ၂လုံး ၂ဗူး ကစ်ပါ
အေဘီစီဘီယာမရနိုင်သော နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများအတွက်မူ ငှက်ပျောသီး တစ်လုံး + အိုးဘရန်ဒီ တစ်ပက် တွဲသုံးပါလေ
ဖီးကြမ်းတဖီးနဲ့ အေဘီစီ တဒါဇင် တခါထဲ ကစ်ထည့်လိုက်ရင်ရောကွာ…။
ညီးနဲ့ အေ အမျိုးသားသီးသန့် လဲပြောသေး…
အားကုန်ခြင်သလား ပျားအုံကို ဒုတ်နဲ့ထိုးဘာ
ပြေးတော့ ကျမ္မာရေးနဲ့ ညီညွှတ်ဒယ်
ချင်းအသုံးပြူလျှင်သတိပြုသင့်တဲ့အချက်မှာ သွေးမတိတ်ရောဂါ၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ပျောက်ခဲသည့် အရေပြားရောဂါ နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပူလောင်ခြင်းဝေဒနာ၊ နွေရာသီ အပူပြင်းချိန်တွေမှာ ချင်းအသုံးပြုခြင်း မပြုသင့်ဟု ဖတ်ဖူးပါတယ်၊ အဲလိုဆိုရင်ရော အခုနည်းက အချိန်တိုင်း လူတိုင်းသုံးစွဲလို့ ရပါသလား သိချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဂျင်းကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် အချိန်တိုင်း သင့်တော်ပေမဲ့
ဂျင်းနှင့်မတည့်သည့် ရောဂါ အခံ ရှိပါက သုံးစွဲရန် မသင့်ပါကြောင်း..
ကန်ဒယ်လေးက စေတနာနဲ့ ပေးတဲ့ ဆေးနည်းဆို
သေဆေးလည်း ဦးစည်က အလုံးလိုက် ရေမစိမ်ပဲ မျိုချပီးသား…
ကန်ဒယ်လေး နောက်လည်း ဆီးနဲ့ပတ်သက်ဒဲ့
ဦးစည်က ဆီးခဏခဏ တင်းဒတ်လို့ဘာ… ;) ;)
စိတ်ချပါ..ဦးစည် အတွက် ဆီးဆေး ..
အသေ အချာ ကိုထပ်တင်ပေးဦးမှာ..
ဘိုးတော်ပုကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ …
စိတ်ပါပေမဲ့ ခြေထောက်က ငြင်းဆန်နေသဗျ ….။
ဒမယ် မောင်ရင် လေး …
တုန်ချိချိ ဖြစ်စပြုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ သများတို့ အရွယ်အတွက် အစွမ်းထက်တာလေး
ဒီဆေးနည်းလေးကို ဘီယာလုပ်တဲ့ formula ထဲထည့်လုပ်လိုက်ရင်
အဲဒီ ဆေးနည်းက အမျိုးသမီး တွေရော စားလို့ရလားဟင်!
Comment တွေ ဖတ်ပြီး ရယ်ရနဲ့
ဒို့ရွာ ကြီးက တယ်ပျော်စရာ ကောင်းပါလား
အမျိုးအမီးတွေလဲ သုံးလို့ ရပါတယ်..
candle ကဒို့ ရွာထဲက ဦးဦး..အကို..မောင်လေး တွေကို
စ ချင်လို့ တမင်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တပ်ပေးလိုက်တာပါ..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရွာထဲကလူတွေအားလုံးကို candle ချစ်တယ်..ရွာထဲဝင်တာ
မကြာသေးပေမဲ့ အားလုံးကို သံယောဇဉ် ဖြစ်မိပါတယ်..
ဒို့ ရွာလေးက သာယာတယ်နော်..
တိဒယ်.. သိပါဒယ်.. အဲ့စကားလုံးလေးတွေကြောင့်
ဦဒတ်သ၊ ဦးစည်၊ ဦးပေ၊ ဦးဘိုက်တို့ ရွာထဲမှာ
ဒီကလည်း သံယောဇဉ်ဖြစ်နေပီနော်… ဟီးးး
အမျိုးတမီးတွေလဲ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ …..
၁၅ကျပ် .. ယူသွားပီ …
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး အားရဝမ်းသားနဲ့ WIFI ကွန် မကောင်းလို့ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးအားရဝမ်းသာဝင်အလာ ရင်ဝဖနောင့်နဲ့ ဆီး ကန်လိုက်ပါလားနော်
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ကွန်မကောင်းတာကို အကြာကြီးစောင့်ပြီးမှ တက်လာတော့…. ဟင်းဟင်း..